Khin Maung Chin: လူမဆန်သောလူတစ်ယောက်အကြောင်း
အိမ်ရှိသူတွေကလည်းလက်ရှိအိမ်ထက်ပိုမိုသစ်လွင်ကျယ်လွင့်သောအိမ်ကိုအလိုရှိတယ်။ ရုပ်သံစက်ရှိသူတွေအတွက်လည်း မက်ချင်စရာ၊ဘယ်နှရာခိုင်နှုန်းတောင်လျှော့ပေးဦးမည်ဆိုတဲ့ ကြော်ငြာတွေကြားမှာအံတကြိတ်ကြိတ်၊မာန်တဝင့်ဝင့်။
ယုတ်စွအဆုံး၊စားစရာသောက်စရာမှာပင်စားချင့်စဖွယ်ဆင်ယင်ထုတ်ပိုးထားသောစားစရာတွေက ဒီခေတ်မှာပိုများလာတယ်။ သည်တော့လူတွေငွေမက်တာမဆန်းပါ။ကြွယ်ဝချင်တာမဆန်းပါ။ အာရုံတွေများနေတာမဆန်းပါလို့ယေဘုယျပြောပါရစေ။
ဆန်းတာကငွေကြေးကိုမက်မောရကောင်းမှန်းသိလာသလိုကြွယ်ဝလိုစိတ်အပြည့်နှင့်ထိုလူတွေကား အသိဉာဏ်နှင့်စာရိတ္တအရာမှာချွတ်ခြုံကျသည်ထက်ကျကျလာတာပင်ဖြစ်တယ်ဗျာ။ ဘယ်လောက်ထိအောင်စာရိတ္တတွေချွတ်ခြုံကျနေသလဲဆိုရင်ကိုယ်လိုအပ်လို့ကိုယ်က ခ,ယပြီးအကူအညီတောင်းထားရတဲ့လူကိုတောင်ပြန်ပြီးအချောင်နှိုက်ချင်စိတ်နဲ့၊
စကောလောက်မှစောက်မနက်တဲ့၊အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့အတွေးအခေါ်လေးနဲ့ချောက်ချချင်တဲ့ မောင်ရင်ငတေတွေကလည်းပေါများလာပြီလို့ဆိုရတော့မယ့်အထိပါပဲ။ အဲဒီလိုလူမျိုးတွေဒီဖက်ခေတ်ကြီးမှာရှိနေတာကိုကအံ့သြစရာပါ။
ဘယ်သူသေသေငတေမာပြီးရောဆိုသော “ငတေစိတ်” တွေဖွံ့ထွားလွန်းမကဖွံ့ထွားနေတဲ့ခေတ်ကြီးတစ်ခေတ်ဖြစ်လို့လာ
ဒီပို့စ်လေးကိုလည်းသူမြင်ကောင်းမြင်နိုင်ပါတယ်။သို့ပေမယ့်ကျနော်ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ လောကကြီးကိုရိုးရိုးသားသားမြင်တတ်ဖို့ကြိုးစားပြီးရုန်းကန်နေရတဲ့ ကျနော့်လိုမျိုးတခြားသူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွေ့အကြုံရအောင်နဲ့ဆင်ခြင်နိုင်အောင်
စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှု၊အသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးမှု၊စာရိတ္တဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအပြုသဘောဆောင်အားပေးတဲ့ အနေနဲ့ရေးတာပါ။ဒါမှလည်းအဲလို ''ငတေစိတ်သမား'' ''အချောင်သမား'' တွေကိုရှောင်ကြဉ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်လို့ပါပဲ။ဖြစ်ပုံကဒီလိုပါ။ပို့စ်အစလေးမှာပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့..
အလုပ်ကပြန်လာပြီးအဝတ်အစားလဲနေတုန်းမှာပဲမြည်လာတဲ့ဖုံးကြောင့်ကောက်ကိုင်လိုက်တော့ မြန်မာပြည်သားတစ်ယောက်ရဲ့ဖုံးဖြစ်နေတော့တယ်လေ...။ အရင်လည်းတစ်ခါနှစ်ခါဖုံးနဲ့စကားပြောဖူးနေလို့(အပြင်မှာမမြင်ဖူးခဲ့ပါ.သူများမိတ်ဆက်ပေးသဖြင့်
ထရောင်ဟိုင်မ်းဆေးရုံကြီးမှာဆေးရုံတင်ထားရတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်လေ..။ သူများပြောတာအရင်ကြားဖူးထားတာကဂျိုင်းထောက်နဲ့အားကိုးပြီးသွားလာရတယ်ဆိုတာပါပဲ..... သူ့လိုဒုက္ခိတတစ်ယောက်သူများမြို့(ထရောင်ဟိုင်မ်းမြို့ဆိုသည်မှာ
သူနေထိုင်ရာမြို့မဟုတ်ပါ)မှာဆေးရုံလာတက်ပြီးကုသမှု့ခံယူနေရတယ်ဆိုတော့ကျနော့်နေရာမှာ ဘယ်သူမဆိုအဲဒီသူကိုစာနာမိမှာအမှန်ပါပဲ။အဲဒါနဲ့ကျနော်လည်းသနားမိပြီးအစ်ကိုရေ..... ဘာလိုသလဲပြောပါ။ကျနော်မနက်ဖြန်ဆက်ဆက်လာကြည့်ပါ့မယ်.. အဲဒီအခါအစ်ကိုစားချင်တာရှိရင်ပြောထားပါ..ကျနော်တစ်ခါတည်းယူလာလို့ရအောင်ပါ...လို့ပြောတော့ သူက...နည်းနည်းပါးပါးစားစရာလေးတွေမှာပါတယ်။ ဒါနဲ့ကျနော်လည်းသူမှာထားတဲ့အတိုင်းဆေးရုံကြီးကိုလူမမာသွားကြည့်တော့တာပေါ့ဗျာ။
ကိုယ့်မြန်မာပြည်သားအချင်းချင်း၊ပြီးတော့မြို့ခံမြန်မာပြည်သားဆိုတာကလည်းအနည်းအကျဉ်းပဲရှိတာပါ။ နောက်ပြိးကျောင်းနဲ့အလုပ်နဲ့ဘယ်သူမှသေသေချာချာမအားကြတာကြောင့် တခြားဘယ်သူ့ကိုမှမခေါ်တော့ပဲကျနော်တစ်ယောက်ထဲသွားလိုက်မိတာပေါ့ဗျာ။
ဘယ်လိုလှည့်ပတ်ပြီးစီးပွါးရေးလုပ်ခဲ့တာတို့၊(စီးပွါးရေးဟုအမည်တပ်ရသော်လည်းလူကုန်ကူးခြင်း၊ ဒေါ်လာငွေအတုပြုလုပ်သောသူများနှင့်ပေါင်းသင်းကာစီးပွါးရှာခြင်း၊ အခြားမသမာသောစီးပွါးရေးများကိုပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးဖြင့်ပါဝင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ခြင်းတို့ကိုပေါ်တင်
ဘယ်သူဘယ်ဝါ၊ဘယ်ပရော်ဖက်ဆာ၊ပါမောက္ခတွေကသူ့သူငယ်ချင်းပါ၊ ဂျပန်မှာသူ့တူဘယ်နှစ်ယောက်ကဘာတွေလုပ်ပြီးကြီးပွါးနေတာ၊ သြစီမှာသူ့ဦးလေးတွေရှိနေတာ....စတဲ့အရည်မရအဖတ်မရစကားတွေချည်းသာ....။ ဒါတွေသူပြောလို့နားထောင်ရပေမယ့်လုံးဝမယုံပါဘူး..ဘာလို့လည်းဆိုတော့အဲလိုအတွေ့အကြုံစုံလင်ပြီး နိုင်ငံနှစ်ဆယ်ကျော်ကိုအမြဲအဝင်အထွက်လုပ်နေသောသူ၊
ကိုကြွားချင်တာနဲ့သူကဆက်လိုက်တာပါ..။တကယ်ဆိုအရေးမကြီးပဲကျနော့်ကိုရှေ့မှာထားပြီး ကျနော့်ကိုခွင့်မတောင်းပဲဖုံးဆက်တာကိုကသူ့အရည်အချင်းကိုသူပြလိုက်တာပါ။ ပြီးတော့အင်မတန်မှနားလည်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ဂရမ္မာမသိ၊အထာမရှိတဲ့ထော့ကျိုးအီးလိုစကားနဲ့
ကျနော့်ရှေ့မှာပြောလိုက်သေးတယ်..။တကယ်ဆိုကိုယ့်အရည်အချင်းကိုယ်သိရမှာပါ။ ကိုယ်မပြောတတ်ရင်ရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ပြောတတ်ချင်ယောင်ဆောင်တာကရှက်စရာပါ။ သူ့ခမျာကျနော့်ကိုအပြင်မှာတစ်ခါမှစကားမပြောဖူးသေးတော့ကျနော့်အနေအထား
မှန်ကိုမခန့်မှန်းနိုင်သေးဘူးလေ......။ဒါနဲ့ပဲရှေ့မှာရှိတဲ့သူကိုဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ငါ့လောက်မသိပါ၊ မရှိပါဆိုတဲ့ယုတ်ညံ့သေးသိမ်တဲ့သူ့ဝသီအတိုင်းပဲပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့သူ့ကို ကျနော်အထင်ကြီးသွားအောင်လုပ်ပြနေတာပါ။အမှန်ကသူမသိလိုက်တာပါ....။
အစ်ကိုခုနကပြောတော့တစ်လကိုဒေါ်လာငါးထောင်လောက်သုံးလာတာဆို? ခုဒေါ်လာဘယ်လောက်တောင်လွှဲမှာလဲ? ဆိုတော့မလေးငွေ
အဲဒီအချိန်ထိစောင့်နေလို့မရဘူးညီလေးရဲ့...မင်းအစ်မဒုက္ခရောက်နေမှာပေါ့ကွာ..ကူညီပါ....။ လို့ထပ်ပြောနေတော့.....ကျနော်လည်းမငြင်းနိုင်ဘူးလေ...။ သူဘယ်လိုပဲရွှီးနေရွှီးနေလောလောဆယ်တော့ဒေါ်လာနှစ်ထောင်ကိုနှစ်ရက်လောက်မဆိုင်းနိုင်လောက်အောင် အခြေအနေဆိုးနေပြီဆိုတာကျနော်နားလည်လိုက်ပါတယ်။ ဟိုမှာလူတစ်ယောက်ငွေအရေးတကြီးလိုနေတဲ့အချိန်ပို့ရမယ့်သူကလည်းဆေးရုံပေါ်မှာဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်
အစ်ကို့ဆီမှာလက်ကျန်ငွေဘယ်လောက်ကျန်သေးလည်းမှတ်မိလားပေါ့..။သူကNOK 10500 လောက်ရှိမယ်တဲ့.....။ဒါနဲ့ကျနော်လည်းချက်ချင်းနီးစပ်ရာဘဏ်ကိုသွားပြီး
ပြီးတော့စာတတ်ပေတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရေးပေးလိုက်တဲ့ငွေလွှဲစာရွက်ကလေးမှာငွေလက်ခံမယ့်သူကို အီးလိုစာလုံးပေါင်းရေးထားတာမှားနေပြန်တယ်လေ..။ ကိုယ်နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာပေါင်းလာခဲ့တဲ့မိန်းမနာမည်တောင်မှန်အောင်မရေးတတ်သေးပါလားလို့ ကြံဖန်တွေးရင်းပြုံးလိုက်မိသေးတယ်။ အဲလိုမှားနေတာကျနော်မသိပါဘူး...။ဘဏ်ကလည်းဘယ်သိပါ့မလဲဗျာ.....။
ကျနော်သိမထားပါ..ဒီတော့Checkမလုပ်ဘူးပေါ့။ဘဏ်ကကိစ္စဝိစ္စတွေပြီးတော့ကျေးဇူးရှင်ကို ပြေစာသွားပို့တော့သူကသေချာကြည့်ပြီးမှ ''ဟာ သွားပါပြီကွာ.'' ဆိုပြီးထအော်တော့တာပါပဲ...။ဝက်ရူးများပြန်သွားသလားလို့ကျနော်တောင်တော်တော်လန့်သွား
မိတယ်.....:P ဒါနဲ့ကျနော်က ''ဘာဖြစ်တာလဲအစ်ကို၊ဘာသွားပါပြီဗျာလဲ?'' လို့မေးလိုက်တော့ ''ဒီမှာလေ......ငါ့မိန်းမနာမည်စာလုံးပေါင်း
အစ်ကိုကျနော့်ကိုဘာမှအပြစ်တင်နေစရာမလိုပါဘူး...မှားတာကအစ်ကိုရေးတာမပီပြင်လို့လည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ဘဏ်ကမှားသွားတာလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် ။ ကြားထဲကကူညီပေးတဲ့ကျနော်ကတော့မမှားပါဘူး..ပြီးတော့အဲလိုမှားပါစေဆိုပြီးတမင်ညစ်ပတ်ရ အောင်လည်းကျနော့်အတွက်ဘာအကျိုးအမြတ်မှမရှိဘူးဆိုတာသိထားပါ'' လို့တုန့်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တော့သူလည်းနားလည်သွားလား
ကိုယ့်ဖက်ကဘာမှမမှားမယွင်းရအောင် ATM မှာငွေထုတ်ခဲ့တဲ့စလစ်စာရွက်တွေ၊ဘဏ်ကပြေစာရယ်၊သူ့Visaကဒ်၊နောက်ပြီးတော့သူ့
အဲဒါကိုသူ့ကိုပြောပြတော့သူကလည်းဟုတ်မှာပေါ့တဲ့....ပေါ့ပေါ့ဆဆပဲ..။ကျနော်က အစ်ကို့ဘဏ်ကအစ်ကိုငွေသုံးထားတဲ့စာရင်းစာရွက်ပို့ပေးလားဆိုတော့ပို့ပေးတယ်တဲ့။ အိုခေပေါ့..ဒါဆိုအဲဒီစာရင်းစာရွက်လာရင်တိုက်ဆိုင်ကြည့်ပေါ့ဗျာ....။ဒါမှမဟုတ်အင်တာနက်ကနေ
နှုတ်ဆက်ပြီးပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဗျာ.....။အိမ်ရောက်ပြီးတစ်နာရီတောင်မပြည့်သေးဘူးဖုံးကဝင်လာပါပြီ.။ ''ညီလေးရေတဲ့..ငွေကမင်းပြောသလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့...တစ်သောင်းကျော်ရှိနေတာတဲ့....။ ငါ့ကိုအခုပဲငါ့အိမ်နားကမြန်မာပြည်သားတစ်ယောက်ကဖုံးဆက်တယ်တဲ့..''
ဒါမှမဟုတ်လကုန်ဘဏ်ကစာရင်းစာရွက်ပို့တဲ့အခါကြည့်ရင်ကြည့်..ဒီလိုမှအမှန်သိရမှာမဟုတ်ဘူးလား?'' လို့ပြန်မေးတော့...''ငါလည်းဘယ်သူ့ကိုမှပြန်မပြောပါဘူးကွာတဲ့'' ....ဟာ....ပြန်မပြောပါဘူးဆိုတဲ့စကားက ကျနော့်စေတနာကိုစော်ကားပြီးမဟုတ်ကဟုတ်ကတွေးလိုက်တာပဲလေ..။
ဒီမှာတင်ဒေါသပေါက်ကွဲသွားပြီး ''ခင်ဗျားလူကြီးဖြစ်ပြီးဘာစကားပြောတာလဲဗျ....တကယ်ဆိုခင်ဗျားကိုဘာမှမဆိုင်ပဲအချောင်သက်သက် ကူညီပေးတဲ့ကျနော့်ကိုခင်ဗျားဒီလိုစွပ်စွဲဖို့မကောင်းပါဘူး..... အထောက်အထားခိုင်ခိုင်လုံလုံမရှိပဲဘာကြောင့်ခင်ဗျားကျနော့်ကိုစွပ်စွဲတာလဲ?'' လို့မေးတော့သူက ''မင်းလွှဲပေးမယ်ဆိုလို့ငါကယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဘဏ်ကဒ်ထည့်ပေးလိုက်တာခုလိုလုပ်တာတော့ မကောင်းပါဘူးကွာ...မင်းဘာလို့အဲလိုလုပ်ရတာလဲ...တကယ်ဆိုငါ့မှာ တခြားလူတွေအများကြီးရှိနေတာမင်းကိုယုံမိတာငါ့အမှားပဲ'' တဲ့...။ တောက်.......စဉ်းစားကြည့်ပါဗျာ..ကျနော့်ဖာသာ
နိုင်အောင်သနားစဖွယ်ပြောပြီးအကူအညီတောင်းတာကသူ..။ ခုတော့ကျနော်ကလိမ်ညာချင်လို့အတင်းပဲသွားငွေလွှဲပေးသလိုဖြစ်သွားအောင်သူပြောနေတာလေ...။ ကျနော်လည်း ''ခင်ဗျားဘာမှအပိုတွေလျှောက်ပြောမနေနဲ့...ခင်ဗျားကိုကူညီမယ့်သူတွေရှိတယ်ဆိုတာ ချီးစားပြောတောင်မယုံဘူးလို့၊ကျနော်တောင်ခင်ဗျားအကြောင်းမသိလို့ကူညီမိတာလို့.....
ကျနော့်ဆီဘယ်တော့မှဖုံးဆက်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့လို့ '' ပြောပြီးဖုံးချပစ်လိုက်တယ်လေ..။အသားတွေတောင်တဆတ်ဆတ်တုန်လာတဲ့အထိဒေါသထွက်
သွားတယ်ထင်ပါရဲ့..ကျနော့်ကိုပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်ဆဲပါလေရော...ရေးပြလို့မရအောင်ကိုရိုင်းရိုင်းဆိုင်းဆိုင်း ဆဲနေတော့ကျနော်လည်းစိတ်တော်တော်ရှုပ်ပြီးဖုံးချထားလိုက်တယ်...။ မကြာပါဘူးခဏနေတော့ပြန်ဖုံးဆက်လာတယ်လေ......ကိုင်လိုက်တာနဲ့ကျနော်ကစပြီး ''ခင်ဗျားကျနော့်ကိုစွပ်စွဲသလိုအထောက်အထား
ပြနိုင်ပြီဆိုမှဖုံးဆက်ပါ..ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျနော့်ကိုလုံးဝဖုံးမခေါ်ပါနဲ့'' လို့ပြောလိုက်တော့မအေနှမတွေနဲ့ကိုင်တုတ်ပြီး ''မင်းငါ့ပိုက်ဆံပြန်ပေးမလားမပေးဘူးလား'' တဲ့။
ကျနော်က ''ခင်ဗျားပိုက်ဆံတစ်ပြားတစ်ချပ်မှကျနော်မယူထားဘူးနော်... ကျနော့်အိတ်ထဲကစိုက်ပြီးတောင်(ကားခတွေ၊ခင်ဗျားအဖို့ယူလာတဲ့စားစရာတွေ)သုံးထားသေးတာ.
ကျူးလွန်ပြီးရင်လည်း 100% ပြေးမလွတ်ပါဘူး..။ လူတစ်ယောက်စီရဲ့အသေးစိတ်ဘိုင်အိုတွေ၊သက်ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေသိမ်းဆည်းထားတတ်တဲ့ ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးမှာပြစ်မှု့ကျူးလွန်သူတွေအတွက်ဘောင်အရမ်းကျဉ်းသွားပါတယ်...။ ဦးဏှောက်မရှိတဲ့လူတစ်ချို့သာsystemတွေသဘောမပေါက်လို့လုပ်ချင်ရာလုပ်လို့ရမယ်ထင်နေကြတာပါ။
ဖုံးမဆက်သေးပါဘူး...။ဘယ်လိုမှလိမ်ညာလို့မရတဲ့ System တွေရှိနေရဲ့သားနဲ့ဗျာ.....မသေချာပဲဘလိုင်းကြီးစွပ်စွဲရက်တယ်..အံ့ရော..။
အဲလောက်ပိုက်ဆံလေးကတကယ်ဆိုဘာမှမဟုတ်ဘူး....သူပြောသလိုသူ့လို International Business Man အနေနဲ့ဆိုကွမ်းဖိုးလောက်ပဲရှိတာပါ။
သူကွာနေတယ်ပြောတဲ့ငွေအတိုင်းအတာကလည်းမြန်မာငွေနှစ်သိန်းတောင်မပြည့်ပါဘူး...။ အဲလောက်ငွေလေးနဲ့ ကိုယ့် Future ကိုဖျက်ဆီးရဲတဲ့သတ္တိကျနော်မမွေးရဲသေးပါဘူး။
အရေးအသားညံ့ဖျင်းလို့ဟာနေတာတွေ၊သဘာဝမကျတာတွေရှိနေခဲ့ရင်လည်း တိတိကျကျရှင်းပြဖို့အဆင်သင့်ပါ။ ခုထက်ထိတော့ဘာဖုံးမှမလာသေးပါဘူးး..
လာခဲ့ရင်လည်းလာတဲ့အချိန်မှာရှင်းဖို့စောင့်မျှော်နေဆဲပါ။ ဟိုဒင်းအချိန်မစီးတဲ့လောကအမှိုက်အရှုပ်ထုပ်ကြီးရေ.......Wellcomeပါဗျို့........Everytime Wellcomeပါ။
လတ်တလောကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့ပြသနာတစ်ခုကိုဖတ်လိုက်ရလို့အနှောက်အယှက်များဖြစ်သွားကြရင် တောင်းပန်ပါတယ်စာဖတ်နေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေရေ.....။အဲဒီလိုလူတွေ ''ငတေစိတ်ရှိသူတွေ၊အချောင်သမားစိတ်ရှိသူတွေ'' ကိုသတိထားနိုင်အောင်လို့ခင်မင်စွာ လက်တို့လိုက်တာပါ။
Aug 18, 2011, 4:19:00 AM
မြန်မာပြည်သား အချင်းချင်း ဖြစ်နေတာတောင် ရှက်စရာကောင်းလှပါပြီ
စိတ်ထဲထားမနေပါနဲ့ သူဘယ်လိုလူလည်း ဆိုတာ သိပြီး သားဘဲဥစ္စာ
Aug 18, 2011, 4:35:00 AM
ဒီလူ့စရိုက်က စိတ်မူမမှန်တော့တဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အပြုအမူပါဘဲ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ခွေးရူးကိုက်ရင် သေတတ်တယ်ဆိုတာသတိပြုပါ။
Aug 18, 2011, 5:42:00 AM
အစ်ကိုချင်းကတော့ ဖြစ်ရမယ်... ကိုယ်နဲ့ ခုမှတွေ့ဖူးတဲ့လူကို ပိုက်ဆံကိစ္စ လုပ်ပေးရတယ်လို့... အစ်ကိုလည်း မမှားပါဘူး... ကန်ဒီဆိုလည်း လုပ်ပေးမိမှာပဲ.. အဲ့ဒီလူကြီးက မစဉ်းစားမိဘူးလား မသိဘူးနော်.. ဒီလောက်တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ bank account ကို စစ်ဆေးလို့ရတယ်ဆိုတာ.. ဒါပေမယ့်အစ်ကိုတစ်ခုတော့ သတိထားနော်.. သူက cash လိုချင်တယ်ဆိုပြီး အစ်ကို့ကို ၅၀၀၀ ထုတ်ခိုင်းသေးတာ အကြံအစီတစ်ခုခုတော့ ရှိရမယ်...
Aug 18, 2011, 7:25:00 AM
လူတိုင်းကိုလဲ ကိုယ့်လိုပဲလို့ မထင်ပါနဲ့
ကိုချင်းရေ..နော်ဝေမှာ ဒီလ၀င်ငွေ ထွက်ငွေသိချင်ရင် လမကုန်ခင် မှာလည်း ၁ရက်က စပြီး ဒီနေ့အထိ ဆိုပြီးတောင်းလို့ရတယ်..မြန်မြန် ရှင်းတမ်း လုပ်ပါ...စိတ်မကောင်းပါဘူး..
Aug 18, 2011, 3:24:00 PM
@မရွှေစင်ဦး..နှစ်သိမ့်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ..။ @Anonymousခွေးရူးကိုက်ရင်သေတတ်ပါတယ်..မှန်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်နောက်တစ်ခါအကိုက်မခံရအောင်သတိထားနေပါ့မယ်..။ ခုလိုသတိပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ @ညီမကန်ဒီနဲ့မမဂျပ်စ်မင်း..ခုလိုသတိပေးတာရယ်၊အကြံဥာဏ်ပေးတာရယ်ကြောင့် ကျေးဇူးအထူးနော်..။ @ကိုZPရေ..ဒီလူဆေးရုံမဆင်းသေးလို့ပါ..ဆင်းသွားတာနဲ့ဒီကိစ္စကိုရှင်းခိုင်းမှာပါ။ ခုလိုပြောပြပေးတာကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ်အစ်ကို..။ အားလုံးကိုလေးစားလျက်(ချင်းကလေး)
Aug 19, 2011, 2:45:00 AM
လူတွေက ဒီလိုပဲ ကိုယ်က အားနာလိုက်လျောတက်ပြီဆိုရင် သူတို့က ခုတုံးလုပ်ပြီး အသုံးချတော့တာပဲ.... ဘာမှ စိတ်မကောင်း မဖြစ်နဲ့တော့ .. တကယ် ဒီလိုလူမျိုးက ရွံစရာ
Aug 19, 2011, 6:59:00 AM
ဗြဟ္မစိုရ်တရားတွေ တဖြည်းဖြည်းခေါင်းပါးလာပြီမို့ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်လေးတွေကို ကြုံတွေ့လာရတာပေါ့ ချင်းကလေးရယ်။
@ညီမအိပ်မက်ရေ....ဖြစ်လာသမျှကံအကြောင်းကိုပဲကျေနပ်ရမှာ ပေါ့နော်..။အားပေးနှစ်သိမ့်တာကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်ဗျာ....။ @လေးစားရပါသောအန်တီတင့်ရေ..အန်တီပြောသလိုဘယ်သူတ ရားပျက်ပျက်ကိုယ်မပျက်ဖို့ပဲ(မလွယ်ပေမယ့်)ကြိုးစားနေလျက်ပါ အန်တီ..။အန်တီပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါရစေဗျာ။အန်တီအပါအဝင် ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေရော၊ကမ္ဘာ့လူသားတွေအားလုံးပါ ဘေးရန်ခပ်သိမ်းကင်းဝေးကြပြီးလူအချင်းချင်းဖျံကျခံရခြင်းမှ လွတ်ကင်းနိုင်ကြပါစေလို့လေးလေးနက်နက်ဆုတောင်းလျက်ပါ။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။